रोनाल्डोलाइ बार्सिलोनामा आउन प्रस्ताव ! के आउलान त बार्सिलोनामा ? यस्तो छ संकेत – – Life Nepali
रोनाल्डोलाइ बार्सिलोनामा आउन प्रस्ताव ! के आउलान त बार्सिलोनामा ? यस्तो छ संकेत –
काठमाडौं । युभेन्टसबाट व्यवसायिक फुटबल खेलिरहेका पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई स्पानिस क्लब बार्सिलोनाले प्रस्ताव गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । स्पानिस अनलाइन मार्का अनुसार स्काई स्पोर्ट्सका पत्रकार गुइलेम बालागले बार्सिलोनाले रोनाल्डोलाई अफर गरेको जनाएको छ । *** पूरा भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
आर्थिक कटौती गर्ने अभियानमा रहेको इटालियन च्याम्पियन युभेन्ट्सले आफ्ना स्ट्राइकर रोनाल्डोलाई बार्सिलोनामा पठाउन प्रस्ताव गरेको स्पेनिस पत्रकारले एक अन्तर्वार्तामा दाबी गरेका हुन्। यो प्रस्तावलाई बार्सिलोनाले स्विकार गरे विगत एक दशकमा उत्कृष्ट खेल्दै आएका रोनाल्डो र लिओनल मेसी पहिलो पटक एउटै टिमबाट खेल्नेछन्।
वार्षिक २८ मिलियल पाउन्ड तलब बुझ्दै आएका रोनाल्डोलाई अन्य क्लबमा पठाएर खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको स्पेनिस पत्रकार गुइलेम बलागीले दाबी गरेका हुन्। बलागी फुटबल खेलाडीसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने पत्रकारमा पर्छन्। युभेन्ट्सका स्पोर्टिङ निर्देशक फाबियो पराची, उपाध्यक्ष पाभेल नेडभेद र अध्यक्ष आन्द्रे एग्नेलीले नवनियुक्त प्रशिक्षक आन्द्रे पिर्लोसँग यहि साता बैठक बसेका थिए। जसमा क्लबले बढी तलब बुझ्ने खेलाडी रोनाल्डो र पाब्लो डिबालालाई अन्य क्लबमा पठाउने निर्णय गरेको स्पेनिस मिडिया स्पोर्ट्समिडियासेटले जनाएको दाबी गरेको छ।
रोनाल्डो र डिबाला दुवैसँग क्लबको सम्झौता २०२२ सँग छ। तर यी स्टारलाई अन्य क्लबमा पठाउन सके ५० मिलियनदेखि ९० मिलियन पाउन्डसम्म कमाउन सक्ने क्लबको विश्लेषण छ। ‘उनलाई सबै तिर प्रस्ताव गरिएकोमा बार्सिलोना पनि पर्छ,’ बलागीले फाइभ लाइभ स्पोर्ट्ससँगको कुराकानीमा रोनाल्डोबारे भनेका छन्,’बार्सिलोनाले सजिलै रोनाल्डोलाई आबद्ध गर्नेमा ढुक्क भने छैन। किनभने रोनाल्डोलाई कसले कति पैसा तिर्न सक्छ भन्ने हो।’कोरोना भाइरसका कारण बार्सिलोनामा पनि आर्थिक संकटमा छ। त्यसैले उसले मोटो रकम खर्चन तयार हुनेछैन।
इटालियन कप र च्याम्पियन्स लिगको हारले गर्दा रोनाल्डोको भविष्य के हुने भन्ने भइरहेको बेला बार्सिलोनाले उनलाई प्रस्ताव गरेको खबर बाहिर आएको हो । यस्तै युभेन्ट्समा रोनाल्डोको तलब पनि महँगो छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार युभेन्ट्स रोनाल्डोको तलब पनि घटाउने तयारीमा छन । युभेन्ट्सले लगातार नवौं पटक सिरी ए उपाधि जिते पनि च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा फ्रेन्च क्लब लियोनसँग अवे गोलका आधारमा पराजित हुँदै बाहिरिएको हो । रोनाल्डो २०१९-२० सिजन युभेन्ट्सका लागि ३५ गोल गरेका थिए ।
रोनाल्डो र मेसीले एउटै क्लबबाट खेलेमा त्यो फुटबलप्रेमीका लागि अनुपम हुनेछ।दुवैले अहिलेसम्म कुल ११ बालन डि’अर अवार्ड जितेका छन्। जसमा मेसीले ६ पटक र रोनाल्डोले ५ पटक अवार्ड हात पारेका छन्। करिअरमा दुवैले अहिलेसम्म कुल १२७२ गोल गरिसकेका छन्। जसमा मेसीले ६३४ गोल र रोनाल्डोले ६३८ गोल गरेका छन्।यस्तै मेसीले अहिलेसम्म २८५ एसिस्ट र रोनाल्डोले २२३ एसिस्ट गरिसकेका छन्।
Previous केपि ओलिले भर्खरै गरे यस्तो क’डा निर्णय ! सुनेरै झ’स्किए नरेन्द्र मोदि !
Next चिनबाट नेपालको लागि आयो अत्यन्तै खुसिको खबर –